Soo galootiga Eriteriyaanka oo kor kacdey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Alexandra Svedberg/Anders Wiklund/Scanpix. Montage: Sveriges Radio.
Soo galootiga Eriteriyaanka oo kor kacdey
La cusbooneeyay fredag 30 augusti 2013 kl 09.34
La daabacay fredag 30 augusti 2013 kl 09.09
Tirada soo-galootiga eriteriyaanka ayaa aad kor ugu kacdey iyada oo siddeedii bilood ee sannadka ugu horeeyey ey soo-galooti-nimo ku yimaadeen tiro gaarsiisan 2 200. Halka afar-daloolow mid oo tiradaa ka mid ahina ey soo galeen bishan agioosto. Haddii kor u kaca tirada soo-galootiga eriteriyaanku ey sidaa ku sii socdo ayay noqon doonto kooxda labaad ee qowmiyadaha dalkan u yimaada magan-gelyo –doonka, marka laga reebo qaxootiga ka soo baqoola dagaalada sokeeye ee ka aloosan dalka suriya.
Bishan agoosto oo eynu ku jirno gabagabadeeda oo keliya ayey dalkan magan-gelyo doon u soo galeen qaxooti ereiteiyaan ah oo gaarsii-san 500 oo ruux.
– Haa, waa mid jirta. Waxaan xeradan soo-galootiga ugu yeernaa iminkadan afrikadii yarayd, sida ay sheegtay Gunnel Svedberg, ahna sarkaaladda masuulka uga ah hayadda socdaalka xerada ku meel-gaarka soo-galootiga ee dhaca nawaaxiyada Märsta iyo Gävle. Iyadoona intaa raacisay in kor u kaca tirada soo-galootiga eriteiyaanku yihiin kuwo muuqda.
Dalka Eriteriya ayaa lagu sifeeyaa inuu yahay waddanka ugu liita ee keli-talis uu iminka ka taliyo. War-bixin ay soo saartay hayadda caalamiga ee Qarammada Midoobey waxaa lagu sheegay iney dalka Eriteriya xabsiga ugu jiraan arrimmo la xiriira siyaasadda, dadyoow gaarsii-san 5 000 illaa iyo 10 000 oo ruux. Iyada oo aanay dhanka kale doorasho xor ahi ka dhicin wixii ka dambeeyay kolkii uu dalkaasi xoriyaddiisa ka qaatay Itoobiya muddo iminka laga joogo 20 sannadood. Sidaasi oo ay tahay haddana laga heli kari maayo sababta ey qaxootigu iminka ugu soo bateen dalka Eriteriya gudihiisa.
Bishii maajo ee sannadkan ayay hayadda socdaalku go’aansatay in aan dalka Eriteriya dib loogu celin soo-galooti ka soo jeeda, middaasina lagu macneeyn karo tirada kor u kacdey soo-galootiga eriteriyaanka ee ku soo badanaya Iswiidhen, sida lagu sheegay war ka soo baxay laanta wararka ee Ekot oo wareeysiyo la yeelatay xog-ogeyaal.
Halka uu dhanka kale ku simaha madaxa laanta xeerarka ee hayadda socdaalka Carl Bexelius qabo iney jiraan dhowr arrimmood oo middaa lagu macneeyn karo iney ka dambeeyso iyo weliba xaaladaha ey ku sugan yihiin waddammada jaarka la ah Eriteriya.
– Waxaa dhici karta in xeryaha qaxootiga ee dalka Suudaan oo ey ku sugan yihiin eriteriyaan fara badan iney ka sii xumaadeen. Haddii uu xeryahaa is-bedel ku dhacana ey saameeynayso qaxootiga ku sugan iyo iney ka baqoolaan, sida uu hadalka u dhigay Bexelius.